यस्तो रोग लाग्यो भने उपचारका लागि एउटै खोपको मुल्य २५ करोड रुपैयाँ !
गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » यस्तो रोग लाग्यो भने उपचारका लागि एउटै खोपको मुल्य २५ करोड रुपैयाँ !
बिहिबार १४ साउन, २०७८
काठमाडौं । यो दुनियाँमा अनेक खालका रोगहरु रहेका छन् । धेरै रोगको उपचार सम्भव हुन्छ भने केहिको उपचार हुँदैन ।
केहि रोगहरुको उपचार एकदम महंगो हुन्छ । भारत, बिहार पटनाका बासिन्दा आलोक र नेहाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारलाई आफ्नो छोरा अयन्शको उपचारको लागि सहयोगको अपील गरिरहेका छन् ।
आमा नेहा भन्छिन् कि प्रधानमन्त्री मोदीले सबैलाई मद्दत गर्छन् । त्यसैले उनी सहयोगको लागि अनुरोध गरिरहेकी छिन् ।
ताकि उनको बच्चाको जीवन बचाउन सकियोस् । आलोक र नेहाको छोरा अय्याशलाई असाधारण रोग लागेको छ ।
यसको उपचार एक खोप मात्र हो । तर सबैभन्दा अचम्मको कुरा यो हो कि यो एक साधारण खोप उपलब्ध छैन । यस खोपको नाम जोलजेन्स्मा हो । यसको लागत झण्डै २७ करोड पर्दछ ।
आजतकसँगको कुराकानीमा आयन्शका अभिभावकहरूले छोरा कस्तो रोगबाट पीडित छ भनेर उल्लेख गरेका हुन् । यसको उपचार के हो भनेर जान्ने प्रयास पनि गरिएको छ ।
यसमा, बुवा आलोकले उनको छोराको स्वास्थ्य जन्मेको २ महिनापछि बिग्रन थालेको बताएका छन् । तर उनलाई १५ दिनसम्म थाहा थिएन कि आयन्श कस्तो घातक रोगसँग संघर्ष गरिरहेका छन् ।
उनले बिहारको राजधानी पटनामा धेरै डाक्टरहरूलाई देखाएका थिए । तर के भएको हो भन्ने कुरा पत्ता लागेन् । त्यसपछि उनीहरुले छोरालाई बेङ्गलोरको निम्हन पु¥याएका थिए ।
त्यहाँ ५ जना डाक्टरको टोलीले आयन्शको जाँच गर्‍यो र त्यसपछि उनलाई गम्भीर रोग लागेको जानकारी भयो । आयन्शका आमाबाबु र चिकित्सकहरू यो जानेर अच्चममा परेको आजतकले उल्लेख गरेको छ ।
आलोकले भने कि बेङ्गलुरुमा उपचारको समयमा थाहा भयो कि छोरालाई स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप–१ नाम को एक दुर्लभ रोग लागेको छ । जानकारी अनुसार त्यस्ता बच्चाहरू केवल १८ महिना देखि २ वर्ष सम्म बाँच्दछन् । त्यस रोगका बिरामीको शरीर विस्तारै सिथिल हुँदै जान्छ । हड्डी दरो हुन्न ।
आलोक कुमारका अनुसार बेङ्गलोरका चिकित्सकहरूले यस रोगको उपचार बताउँदा उनको खुट्टा जमिनबाट भासिएजस्तो भयो । डाक्टरहरूले उनलाई सो रोगको उपचार खर्च झण्डै २६ करोड लाग्ने बताए ।
त्यस रोगको उपचारका लागि चाहिने एउटा खोपको मुल्य झण्डै २६ करोड पर्दछ । डाक्टरहरूले यो खोप अमेरिकामा मात्र बन्ने गरेको बताएका छन ।
उनको छोरा बचाउनका लागि आवश्यक पर्ने खोप अमेरिकाबाट मगाउनुपर्छ । नेहाका अनुसार उनीहरुका लागि २६ करोडको रकम धेरै हुन्छ । उनीहरु सो रकम जुटाउनका लागि मानिसहरूसँग सहयोगको लागि अपील गरिरहेका छन् ।
आम मानिसहरुको सहयोग लिइरहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘हामीले जनताको सहयोग लिइरहेका छौं तर अझै २६ करोड संकलन गर्न गाह्रो छ ।’
आयन्शको परिवारले उपचारका लागि पैसा जुटाउन सामाजिक सञ्जालमा अभियान पनि सुरु गरेको छ । आयन्शको परिवार निरन्तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारसँग सहयोगको लागि गुहार गर्दैछ ।
स्मरण होस् नेपालकी सियोना श्रेष्ठलाईपनि यही रोग लागेको थियो । उनको उपचारका लागि देश विदेशबाट झण्डै १९ करोड उठेको थियो । तरपछि अस्पतालले नानी सियोनालाई निशुल्क उपचार गर्ने भएपछि उक्त रकम सहयोगको खाँचो परेकालाई उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने परिवारको घोषणा थियो ।
विश्वका धनी मस्कका लगातार जुम्ल्याहा-तिम्ल्याहा सन्तान : ४ विवाह, अन्तिमपनि ब्रेकअप नजिक
यी महिला जो आफ्नै मुटु एक झोलामा बोकेर हिँडिरहेकी छिन् : भेट्न चाहानुहुन्छ ?
यो बाख्राले घाँस होईन, माछा खान्छ (भाइरल भिडियोसहित)
छोरीको कपाल बिनाअनुमति काटिदिएको १० लाख डलर क्षतिपूर्ति माग
जब बच्चाको नाममा खोलिएको खातामा एकै पटक करोडौ रकम आयो, त्यो के गरे झनै रोचक !
डिपेन्डेण्टमा युरोप जाने युवा–युवती चाहियो, काठमाडौमा महिलालाई केटा चाहियो [नम्बरसहित]
जब युवकले केटी मिलाई दिन सांसदलाई मागपत्र बुझाए
कम्पनीले बिदा नदिएपछि महिलाले गरिन् यस्तो काम, मिल्यो ३ करोड २० लाख क्षतिपूर्ति
सासू र बुहारीबीचको दुनियाँभरी भाइरल काण्ड के हो ?
श्रीमतीबाट यस्तो बच्चा जन्मिएपछि…
यो देखेर पक्कै जो कोही पर्नुहुनेछ चकित !
के को शक्ति हो यो, पानी उम्लिरहेको छ बालक हाँसिरहेका छन् !
दुनियाँ चकित : जान्नुहोस् यी महिलाले कसरी एक दिनमा नै बसिबसी ५ लाख कमाउछिन् !
दाङमा भयो अहिलेसम्मकै अनौठो घटना
बाबु–छोरीबीचको सोच्नै नसक्ने यो सम्वाद